Orinasa Star sy ny fondation Coca Cola Nanampy ireo hopitalim-panjakana
Fidangan’ny vidin’entana Fa lasa aiza ilay fanaraha-maso ?
Mbola mitohy ve ny fanaraha-maso ny vidin’entana eny an-tsena sa efa lasa ny zavatra taloha ?
Faritra Analamanga Miasa ireo sehatra fototra iainkinan’ny fiainam-bahoaka
Voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 50, miato ny fisokafan’ny fiangonana tsy ankanavaka, miato ny fampisehoana ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena ka na latsaky ny 50 aza tsy azo atao,
Vidin’entana Lasa 500 Ar ny voasary mankirana iray
Nisy sahady ireo entana efa niaka-bidy teny an-tsena taorian’ny niparitahan’ny vaovao fa hiditra anaty fihibohana tanteraka mandritra ny 15 andro ny Faritra Analamanga manomboka anio Alatsinainy.
Mpianatra avy any Fandriana monina eto Iarivo Nahazo tohana avy amin’ireo raiamandrenin’ny tanàna
Notolotran’ireo raiamandreny any an-tanàna nosoloin’ny depiote Dina tena fananampiana ho enti-miady amin’ny tsimokaretina covid 19
Nanolotra fanampiana ho an’ireo hopitalim-panjakana telo eto amintsika ny orinasa Star ny fondation Coca Cola amin’ny fiatrehana ny tsimok’aretina Coronavirus. Fitaovam-pitsaboana mitentina 300.000 dolara no natolony ho an’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, omaly.
Tanjona amin’izany ny hanampiana manokana amin’ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Ny CHU ao Toliara, ny CHR any Maintirano, ary ny CR an’ny distrikan’Ikamavony no notolorana izany izay noraisin’ny ministeran’ny fahasalamana an-tanana ny fitsinjarana azy. Ao anatin’ny 60 andro no hahatongavan’ny sambo sy kaontenera mitondra ireo fitaovana ireo eto amintsika hoy ny avy amin’ny orinasa Star. Tao anatin’ny hafaliana no nandraisan’ny Ministera izany vaovao izany ary nampantena izy ireo fa hampiasa ny fitaovana araka ny tokony ho izy ho tombontsoan’ny reny sy ny zaza tokoa. Tafiditra ao anatin’ny asa sosialy tanterahin’ny orinasa Star entina hanampiana ny mpiara-belona moa ity fanolorana fanampiana izao.